Ubuyela enkantolo osolwa ngelokuzama ukubulala owe-Amcu | News24
Ubuyela enkantolo osolwa ngelokuzama ukubulala owe-Amcu
Brits - Ukufakwa kwesicelo sebheyilo ssomsolwa oneminyaka engu-38 ubudala ngecala lokuzama ukubulala usihlalo we-Association of Mineworker and Construction (Amcu) kuyaqhubeka namuhla (ngoLwesine) eNkantolo yeMantshi yaseBrits.
Umbuso usola ukuthi uSamkelo Mkhutshwa wadubula uMalibongwe Mdazo, usihlalo wegatsha le-Amcu eMooinooi eduzane naseBrits.
UKhutshwa waboshwa e-Eastern Cape ngomhlaka-9 Disemba, ngelinye icala lokubulala elenzela eWonderkop ngoSepthemba, wadedelwa kuleli cala ngemuva kokuba iNkantolo yeMantshi yaseRustenburg ingalifakanga icala emabhukwini ayo njengoba afika enkantolo sekuphele amahora angu-48.
OLUNYE UDABA:Uzofaka isicelo sebheyili osolwa ngelokuzama ukubulala owe-Amcu
Wafika enkantolo ngomhlaka-12 Disemba, ngalo lolu suku waboshwa ngokubandakanyeka ecaleni lokuzama ukubulala uMdazo.
UMdazo wadutshulwa amahlandla amaningi enkundleni yezemidlalo eMooinooi ngomhlaka-22 Julayi, okusolwa ukuthi kwakulwa abe-Amcu nabeNational Union of Mineworkers (NUM).
UMkhutshwa uthweswe icala kanye noNkosinathi Mantashe, owadedelwa ngebheyili yemali engu-R10 000 ngoNovemba. Wayeboshwe ngoSepthemba.